Jumma Mubarak SMS 2018 written Download Free - Jumma မူဘာရက် 2018 : အရေးကြီးပုံ, နှစ်, မင်္ဂလာသက်, ः ades, နှင့်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်
Jumma မူဘာရက်အကောင်းဆုံးစာသား 2018 အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်we also collect more sms,ကိုးကား,messeges and all about jumma mubarak keep visiting our sites thanks for your interest.remember us in your prayers thank you “haapy friday jumma mubarak”
2: May Allah show us the path of his beloved people whom he has forgiven and protect us from doing the bad deeds on which may cause us to tie in his torment. Jumma မူဘာရက်.
Start this glorious day with the name of Allah andaprayer that May Allah we are not strong enough to get passed in your exam please forgive our mistakes and show us the right path which may cause our satisfaction. Jumma မူဘာရက်.
5: ငါပျော်ရွှင်မှုသင့်အိမ်တံခါးနှင့်အတူအမြဲနေဖို့ဆန္ဒရှိသင်တို့ကိုငါအစဉ်အမြဲပျော်ရွှင်နေဖို့ဆန္ဒရှိငါသည်သင်တို့ကိုအစဉ်အမြဲအောင်မြင်နေဖို့ဆန္ဒရှိ. မင်္ဂလာ Jumma မူဘာရက်.
6: JUMMA မူဘာရက် '' သောကွာနေ့မင်္ဂလာရှိ '' နှင့်သောကြာနေ့မွတ်စလင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနေ့စဉ်းစားသည်ဆိုလို. ဤနေ့တွင်, မူဆလင်များသာအသင်းတော်တစ်ခုဆုတောငျးခကျြဖူး, သို့သော်လည်း, ထိုသူတို့သည်စကထိကနားထောင်ရန်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်'S မင်္ဂလာထဲကအများဆုံးရအထူးဆုတောင်း
9: သောကြာနေ့, the holiest day of the week May all of you blessed with this day with beautiful deeds And Stay Blessed.
Jumma Mubarak SMS 2018 written Download Free,Jumma မူဘာရက်အကောင်းဆုံးစာသား 2018 အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်,2018 jumma mubarak sms,jumma mubarak sms,jumma mubarak messeges,နောက်ဆုံးပေါ် Jumma မူဘာရက် sms ကို,သောကြာနေ့ sms ကို,sms friday.
Jumma မူဘာရက်အကောင်းဆုံးစာသား 2018 အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်